Hisokatra anio ao Myanmar i Hilton Mandalay
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Myanmar » Hisokatra anio ao Myanmar i Hilton Mandalay
Apetraho eo afovoan'ny zaridaina mahafinaritra efatra hektara, Hilton Mandalay misokatra anio, manolotra trano avo any afovoan-tanàna lehibe indrindra sy mitombo indrindra amin'ny firenena. Manoloana ny havoanan'i Mandalay malaza, izay misy ny sasany amin'ireo pagoda sy monastera tsara indrindra ao an-tanàna, ary koa ny Lapan'i Mandalay mahatalanjona, ny fisintonana ivelany dia manome ny toerana tsara toerana hijerena ireo toerana mahafinaritra indrindra an'i Mandalay.
"Amin'ny maha renivohitry ny mpanjaka teo aloha an'i Myanmar, Mandalay dia toeran-kaleha mahaliana ho an'ireo mpandeha raharaham-barotra sy fialam-boly miaraka amin'ny indostrian'ny be sy ny manintona ara-kolontsaina, ara-pivavahana ary manan-tantara," hoy i Sean Wooden, filoha lefitra, fitantanana marika, Asia Pacific, Hilton. “Manantena ny fanitarana ny fisianay amin'ity toerana fitsangatsanganana tadiavina ity izahay ary hampahafantatra ny fandraisam-bahiny fanta-daza ananan'i Hilton an'ireo mpandeha any Mandalay.
Ny Hilton Mandalay dia manome toerana mora azo hipetrahana ho an'ireo mpandeha mitady fikajiana manintona lehibe ao an-tanàna toa an'i Mandalay Hill, U Bein Bridge ary Mahamuni Pagoda, ary koa ireo mitady hizaha toeran'ireo toerana malaza indrindra ao Myanmar ao anatin'izany ny tanànan'i Bagan, ilay toerana mahafinaritra Tanànan'ny havoanan'i Pyin Oo Lwin ary ilay farihy Inle be voninahitra.
Ny Hilton Mandalay dia manolotra toerana mahafinaritra sy fahitana mahatalanjona ny lapan'ny Mandalay sy ny havoana Mandalay avy amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny 231. Betsaka ny efitrano fandraisam-bahiny ao amin'ny hotely no manana lavarangana manokana ary misy efitrano malalaka misy terraces malalaka. Misy lakozia ao amin'ny efitrano maro, manao an'i Hilton
Ny hetsika fanabeazana ao amin'ny IMEX dia manome fahitana sy aingam-panahy ho an'ny rehetra
Ny 25 martsa dia nanambara ny Andron'ny seranam-piaramanidina Hong Kong ao San Francisco